iNingizimu Afrika inomyalezo ophuthumayo
_Izithakazelo / Clan Praises
_Zithole zonke lapha
Abantu baseNingizimu Afrika bagcwale ezinkundleni zokuxhumana ukuze bahlanganyele ekuphenduleni umhlaba wonke lapho uMongameli waseRussia u-Vladimir Putin eyala "umkhankaso wezempi okhethekile" e-Ukraine. UPutin uthe lesi isinyathelo "sokuvikela" isifunda saseDonbas empumalanga ye-Ukraine futhi wathi kunesidingo "sokuqeda impi" yezwe. I-Ukraine yakubiza ngokuthi "isenzo sempi". Lokhu kuza phakathi kwengxabano ngezindawo ezingaphakathi kwe-Ukraine.
UPutin uthe iRussia ayinazo izinhlelo zokuthatha i-Ukraine - isimangalo esihlangabezane nokungabaza ngabaholi baseNtshonalanga asebexwayise ngokuhlaselwa kweRussia amasonto ambalwa.
Umongameli wase-US uJoe Biden ukubize ngokuthi "ukuhlasela okungenasizathu ngamasosha aseRussia".
Uhulumeni waseNingizimu Afrika ukhiphe isitatimende ngoLwesithathu uthe "ukhathazekile ngezinxushunxushu eziqhubekayo emngceleni we-Ukraine neRussia, isimo uma sivunyelwa ukuthi siqhubeke sibi singaba nomthelela esifundeni nasemhlabeni jikelele". "Umhlaba awudingi enye impi njengoba lokho kuzoholela ekufeni nasekubhujisweni, yingakho sibiza izingxoxo ezithuthukisiwe. Zonke izinhlangothi zinokuningi okuzokuzuza ngomphumela okuxoxiwe ngazo kodwa zilahlekelwe okuningi ngenxa yokungqubuzana okungadingekile nobudlova.”
UMkhandlu Wezokuphepha WeNhlangano Yezizwe (UNSC) uyisigungu esinikezwe igunya lokugcina ukuthula nokulondeka kwamazwe ngamazwe futhi kufanele NjengeNingizimu Afrika, sikholwa wukuthi zonke izingqinamba ezithinta amaqembu kumele zidingidwe ezingxoxweni eziholwa yi-UNSC,” kwengeza ungqongqoshe wezobudlelwano bamazwe ngamazwe kanye nokusebenzisana uNaledi Pandor. Uhlu lwangoLwesine ekuseni, abantu baseNingizimu Afrika bebhekene nengwadla. Abaningi bathi uhulumeni akufanele ahileleke engxabanweni, kuyilapho abanye bebuza ukuthi bazosizwa kanjani abantu baseNingizimu Afrika e-Ukraine.
Tags: Ezepolitiki Izindaba putin russia south africa
Izithakazelo zakwa Dlamini , Dlamini Clan Names, Dlamini Clan Praises
Izithakazelo zakwa Khumalo, Khumalo Clan Names, Khumalo Clan Praises
Izithakazelo zakwa Ndlovu, Ndlovu Clan Names, Ndlovu Clan Praises
Izithakazelo zakwa Nkosi, Nkosi Clan Names, Nkosi Clan Praises
Add Clan Names
By Makhosonke | For Zuluring